Calanka.com – Madaxweynihii hore ee Liberia oo ku guuleysatay abaalmarin 5 milyan oo dollar ah
Ciidanka Koonfurta Kuuriya iyo kuwa Mareykanka oo maska “Cobraha” ku tababarta, ceyriinkana ku cuna: SAWIRRO
Jilaa caan ah oo la saaxiibay gabar soomaaliyeed iyo “shirqool” guur oo uu u dhigay: VIDEO
Wasiirka warfaafinta oo sheegay in ay soo qabteen qalabkii idaacadda Shabaab ee “Andulus”
Qoraa Sacuudiyaan ah oo sheegay in la dhibsan rabo masaajidda iyo aadaanka ku batay Sacuudiga
Sarkaalkii Muqdisho ku dilay taliyihii ciidanka badda oo xukun dil iyo darajo-xayuubin ah lagu riday: SAWIRRO
Madaxweynihii hore ee Liberia oo ku guuleysatay abaalmarin 5 milyan oo dollar ah
in Dibedda — By Admin —	February 13, 2018 -- 3995 Views
Madaxweynihii hore ee dalka Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, ayaa ku guuleysatay abaalmarinta Mo Ibrahim oo ah abaalmarin sanad kastaa la siiyo hoggaamiyeyaasha Afrika ee loo arko in ay dalkooda si wanaagsan u xukumeen.
Ellen Johnson Sirleaf ayaa sanadkii 2006-dii waxa ay noqotay haweeneydii ugu horreysay qaaradda Afrika oo noqota madaxweyne, waxaana xilkaasi ay isaga degtay bishii la soo dhaafay.
Guddiga abaalmarinta ee Mo Ibrahim ayaa sheegay in Ellen Johnson Sirleaf ay muujisay hoggaan wanaag muddadii ay xilka haysay, inkastoo ay caqabado badan la kulantay.
Xilligii Sirleaf ay ku guuleysanaysay doorashadii sanadkii 2005-tii, dalka Liberia waxa uu ka soo bxayay colaad sokeeye, waxaana haweeneydaasi ku guuleysatay abaalmarinta nabadda ee Nobel lagu ammaanaa gacantii ay ka geysatay xasilinta dalka.
Dadka dhaliila Sirleaf ayaa ku eedeeya eex, sababtoo ah wiilasheeda ayaa loo magacaabay xilal muhiim ah.
Waxa ay sidoo kale sheegayaan in aysan wax weyn ka qaban la dagaalanka musuqmaasuqa.
Guddiga abaalmarinta ee Mo Ibrahim ayaa sheegaya in ay ogyihiin khaladaadka iyo waxyaabaha ay ka gaabisay Sirleaf, balse ay go’aansadeen in ay u qalanto abaalmarintaasi shanta milyan ee doolar ah.
Ganacsadaha reer Suudaan ee haysta dhalashada Britain Mo Ibrahim ayaa sanadkii 2007-dii waxa uu billaabay abaalmarintan si uu ugu abaalgudo hoggaamiyeyaasha qaaradda ee muujiyay hoggaan wanaag, maadaama kaligii talisnimo ay ragaadisay horumarka qaaradda Afrika.
Abaalmarinta ayay ahayd in sanad kastaa la siiyo hoggaamiye Afrikaan ah balse lixdii sano ee la soo dhaafay ma jirin hoggaamiye ku guuleytay.
Ellen Johnson Sirleaf waxa ay tobanka sano ee soo socda qadan doontaa shan milyan oo doolar iyo 200,000 oo doolar oo ay qaadan doonto inta nolasheeda ka hartay.
Dhiibo Fikirkaaga Cancel
Dhallinyaradii laga keenay Libya oo ka sheekeynaya dhacdooyin argagax leh oo dalkaasi ku qabsaday: VIDEO
Labo jir god tareen ku dhex dhacay magaalada Milano iyo hab-dhaqanka hooyadii oo lala yaabay: VIDEO
Tuugo nasiib daran oo dhaawac isu geystay xilli ay dukaan jabsanayeen: VIDEO
SAWIRRO TAYO LEH: Shiinaha oo sannadka cusub ee 2018-ka u dhashay bil iyo bar ka dib
Nikolas Cruz oo film iska duubay ka hor inta uusan 17-ka ruux ku dilin iskuulka Florida: VIDEO
2-jir musiibo looga kala cararay oo nasiibku saaciday: VIDEO
SAWIRRO TAYO LEH: Israel oo bilowday musaafurinta 20-kun oo qoxooti Afrikaan ah
SAWIRRO TAYO LEH: Darbi-jiifyada dalka Hong Kong oo u nool qaab yaab badan
SAWIRRO TAYO LEH: Niman naago isku badalay iyo fool-xumada ka raacday
Ciyaartooy Ingriis ah oo taxi ka xaday magaalada Barcelona ee waddanka Spain
Tartan orodka Marathon-ka oo ay ajaanib ka qeyb-galayaan oo Hargeysa ka furmay
Ciyaaryahan hore oo kooxda Manchester ka tirsanaa oo u geeriyooday xannuunka Kansarka
Kooxda Manchester United oo xustay musiibadii Munich
Suuqa kala iibsiga ciyaartoyda Yurub oo xalay xirmay iyo ciyaaryahanka ugu qaalisan ee la iibsaday
Hanoolaato Somaliya: Canshuurtu waxey sare u qaadaa dhaqaalaha wadanka, waxbarash…
Ina dhooley: Noooo qabiiiiil.......…
Fariyaamo: Kii Habargidir ee wasiir Cabaas Siraaji dilay maxaa loogu fu…
Jalaqsan: Lool, daarood is dalay iga dheh oo hawiye xukun u kala qaada…
Mursal: Maxey kuge taal haduu Formajo soo dex galaa oo uu dilka ka b…
Afweyne: Walee soomaaliya haday cadaaladi ka dhacday. Sarkaalka wax d…
Sugule: Wa moriyan an Dawladnimo Aqoon…
Nagu darso Youtube-ka
2006-2018 Calanka.com waa qeyb ka mid ah CALANKA MEDIA.
Kor ku laabo :::: Nagu xayeysiiso :::: Nala soo xiriir :::: Annaga
Waa mamnuuc in la isticmaalo ama la qaato macluumaadka ku jira boggan, amar la`aan.